Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dagaal culus ku qaaday degmada Daayat Showban oo ka tirsan Wilaayada Zaabul oo dhacda Konfurta Dalka Afghanistan.
Ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ayaa si toos ah u beegsaday Saldhigyada iyo Fariisimaha Maleeshiyaatka Ridada Kaabul ay ka sameysteen gudaha iyo duleedka Degmadaasi, Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday Hubka noocyadiisa Kala duwan.
Dagaalkan markii muddo Kooban uu socday ayeey maleeshiyaatka Xukuumadda Ridada Kaabul bilaabeen iney isaga cararaan degmada, Iyadoona ay jirto khasaara culus oo lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Bayaan Rasmi ah oo kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan kuna saxiixanyahay Afhayeenka Imaarada Sheekh Qaari Muxamed Yuusuf ayeey Imaaradu ku xaqiijisay in ciidamada Mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta magaalada Daayat Showban islamarkaana ay Raayada Towxiidka Mujaahidiinta ay ka taageen Bartamaha Magaaladaasi.
Sidoo kale Bayaanka ayaa lagu xusay in dagaalkan lagu dilay Askar fara badan oo ka tirsan Murtadiinta Maamulka Kaabul kuwaasi 12 ka mid ah Meydadkooda ay daadsanyihiin gudaha iyo duleedka Magaalada.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dagalkan ku gubay Labo gaari waxeyna Gacanta ku dhigeen isagoo Bad qaba Gaari Gaashaaman, Waxeyna Dhanka kale Qaniimeysteen keydkii Hubka ee magaaladaasi.
Magaalada Daayat Showban ayaa noqneysa Magaaladii Saddex-aad oo ay si buuxda ula wareegaan ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan tan iyo markii Imaaradu ay ku dhawaaqday Xamlo dagaaleedka Al-fatxi oo ah Xamlo dagaaleed ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan Bishii Saddex-aad si toos ah kaga wadaan guud ahaan Wilaayaatka dalka Afghanistan.
Previous: Taliyihii Police-Ka Hiiraan Oo Beledweyne Lagu Dilay.
Next: Kooxda Xuuthiyiinta Oo Gantaalo ku Duqeysay Garoon Ku Yaal Wadanka Sacuudiga.